Indlela yokufumana iincwadi ezilungileyo zeNkxaso kwiKholeji
Indlela yokufumana iincwadi ezilungileyo kwiSicelo sakho
Uninzi lweekholeji ezinezibhengezo ezipheleleyo , ezibandakanya amakhulu ezikolweni ezisebenzisa iSicelo esisisigxina , ziya kufuna ubuncinane enye ileta yesiphakamiso njengenxalenye yesicelo sakho. Iileta zinikela ngombono ongaphandle kwamakhono akho, ubuntu, iitalente, kunye nokulungelelaniswa kwikholeji.
Ngoxa iileta zinconywa aziqhelwanga nxalenye ebalulekileyo kwinkqubo yeekholeji ( irekodi yakho yezemfundo ), inokwenza umehluko, ngakumbi xa ucebisi uyazi kakuhle. Izikhokelo ezingezantsi ziyakunceda ukwazi ukuba ngubani kunye nendlela yokucela iileta.
Buza Abantu Abalungileyo Ukukuncoma
Ukuthayipha kwikhompyutha yePaptop. Ikhonkco Yomfanekiso / Flickr
Abafundi abaninzi benza impazamo yokufumana iileta ezivela kwiindawo eziqhelekileyo ezinezikhundla ezinamandla okanye ezinamandla. Esi sicwangciso sisoloko sibuyela emva. Utata womntakwabo womntakwabo ungayazi uBill Gates, kodwa uBill Gates akakwazi kakuhle ngokufanelekileyo ukubhala ileta ebalulekileyo. Olu hlobo loonobumba luya kwenza ukuba isicelo sakho sibonakale singekho. Abacebisi abangcono kakhulu ngaba ootitshala, abaqeqeshi kunye nabacebisi osebenze kunye nabo. Khetha umntu onokuthetha ngeemeko eziphathekayo malunga nomdla kunye namandla owenzayo kumsebenzi wakho. Ukuba ukhetha ukufaka incwadi yodumo, qinisekisa ukuba yileta eyongezelelweyo yokucebisa, kungeyona eyona nto.
Khumbula, ucela uncedo. I-recommender yakho inelungelo lokwenqaba isicelo sakho. Ungacingi ukuba ngumsebenzi wabani na ukuba abhale ileta kuwe, kwaye uqaphele ukuba ezi ncwadi zithatha ixesha elide kwishedyuli yakho esele ixakekile. Uninzi ootitshala, ngokuqinisekileyo, baya kubhala incwadi, kodwa kufuneka uhlale ucwangcisa isicelo sakho "ngokubonga" kunye nokubulela. Nangona umcebisi wakho wesikolo esiphakamileyo umchaza womsebenzi mhlawumbi ukubandakanya ukubonelela ngeengcebiso uya kuxabisa ukuziphatha kwakho, kwaye ukuxabisa okunokwenzeka kubonakaliswe kwisinconywa.
Vumela ixesha elaneleyo
Musa ukucela ileta ngoLwesine ukuba kulunge ngoLwesihlanu. Hlonipha i-recommender yakho kwaye umnike iiveki ezimbalwa ubuncinane ukubhala iileta zakho. Isicelo sakho sele sichaza ngexesha lakho lokucebisa, kunye nesicelo sokugqibela sesigxina. Akukuphela nje ukungafuni ukucela ileta ecaleni kwithuba elide, kodwa uya kugqiba neleta ekhawulezileyo engacingi kangako kunokuba yinto efanelekileyo. Ukuba ngesizathu esithile isicelo esiphuthumayo singenakukhunjulwa - buyela emuva kwi # 2 ngasentla (uya kufuna ukuhlonipha kakhulu kwaye uvakalise ukuthokoza okukhulu).
Ukunikezela ngeeNgcebiso ezichanekileyo
Qinisekisa ukuba iziphakamiso zakho ziyazi kakuhle ukuba ziphi na iileta kwaye zifanele zithunyelwe phi. Kwakhona, qiniseka ukuxelela abacebisi bakho ukuba zeziphi iinjongo zakho kwiikholeji ukuze bakwazi ukugxininisa iileta kwimicimbi echaphazelekayo. Kusoloko kuluvo oluhle ukunika i-recommender yakho imisebenzi kwakhona xa unayo, kuba engazi zonke izinto ozifezile.
Ukubonelela ngeTampu kunye neeVivulophu
Ufuna ukwenza inkqubo yokubhala ileta ibe lula kangangoko kunokwenzeka kubacebisi bakho. Qinisekisa ukuba ubanikeze nge-envelopes eziphambili ezibhekiselelwe kuyo. Eli nyathelo linceda ekuqinisekiseni ukuba iileta zakho zengcebiso ziya kuthunyelwa kwindawo efanelekileyo.
Ungabi Nesibindi Ukukhumbuza Iziphakamiso Zakho
Abanye abantu bayayicima kwaye abanye bayayikhohlwa. Awufuni ukugubha nabani na, kodwa isikhumbuzo saso sihlandlo esilungileyo xa ungacingi ukuba iileta zakho zibhaliwe okwamanje. Ungayifeza le ndlela ngendlela efanelekileyo. Gwema isitatimende sokuthi, "Mnu U-Smith, ubhale phantsi kwileta yam? "Endaweni, zama iincwadana ezinesidima ezinjengokuthi," Mnu U-Smith, ndifuna ukukubulela kwakhona ngokubhalela zam iileta zinconywa. "Ukuba uMnu. Smith engabhalwanga ngoku, sele ukhumbule umthwalo wakhe.
Thumela Ibulela Amakhadi
Emva kokuba iileta zibhaliswe kwaye zithunyelwa ngeposi, landela ngokubonga amanqaku kubathandi bakho. Ikhadi elilula libonisa ukuba uyayixabisa imizamo yabo. Iimeko eziyimpumelelo: usuphelile ukhangele uqokelele kwaye uxanduva, kwaye iziphakamiso zakho zivakalelwa.
Imibuzo yoPhulo lweeKholeji ezili-10
Ingaba iCube yeRubik kunye nezinye i-Quirky Passions Ingayifumana kwiKholeji?
Iimpazamo eziqhelekileyo eziqhelekileyo zeeKholeji zeeKholeji
Uninzi Kangakanani Iminyaka YesiNgesi Ngaba Uyafuneka?
Isithethe sokuhlonipha abaAncestors eSamhain
'Uzalwe Ngamaqhopho' UMlawuli uZana Briski Ubuyela Kuye Uthando Lokuqala: Ukufotwa
Uthini U-Islam Ngokuphathelele Ubungqingili?
Iintlobo ezisixhenxe okanye i-Shvat HaMinim
Iindlela ezili-10 ezilula zabafundi bokugcina imali
Kubaluleka kweMagna Carta kumgaqo-siseko wase-US
Ukubulala i-Mockingbird Study Guide
Funda i-Computer Programming Language Online kwi-Free
IWilson College Admissions
Imfazwe YaseMelika: Ukuvinjelwa kweVicksburg
Ukuguqulelwa kwe-'La Donna E Mobile ': Ukususela kuGuuseppe Verdi's Opera,' uRigoletto '
Survivre - ukusinda
Iincwadi eziphezulu zaseDu'a (Ukuncenga kwamaSilamsi / Imithandazo)
Indlela yokumisela umgca wokugqibela usebenzisa i-Oldest and Best Method
Iingqinisiso zesenzi sesiTaliyane: i-Organizzare